Single Mother တို့ရဲ့စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျမှုနဲ့ ခြီးကြူးဖှယျရာ အရညျအခငျြးမြား - Tameelay
Single Mother တို့ရဲ့စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျမှုနဲ့ ခြီးကြူးဖှယျရာ အရညျအခငျြးမြား
May 9, 2020 by Tameelay
ကလေးတဈယောကျကိုပွုစုပြိုးထောငျရတာဟာ အတျောလေးမလှယျတဲ့အလုပျပါ။ ပငျပနျးလှနျးလို့၊ မလုပျခငျြတော့လို့ဆိုပွီး ရပျပဈလို့ရတဲ့အလုပျမြိုးလညျးမဟုတျပါဘူး။ မမှေးခငျကိုယျဝနျဆောငျပွီဆိုကတညျးက အရိပျတကွညျ့ကွညျ့ဂရုစိုကျရတာ မှေးပွီးတဲ့အခြိနျ၊ လမျးစလြှောကျတဲ့အခြိနျ၊ ပညာသငျတဲ့အခြိနျကနေ အသကျကွီးလာတဲ့အခြိနျထိ တောကျလြှောကျပါပဲ။ မိစုံဖစုံရှိတဲ့မိသားစုတှတေောငျမှ ကလေးပွုစုပြိုးထောငျဖို့အတှကျ အခကျအခဲတှအေမြားကွီးကိုရငျဆိုငျရပါတယျ။ မိဘတှမေစုံလငျတဲ့မိသားစုတှေ၊ Single mother တှဆေိုရငျ ကလေးတှကေို ပွုစုပြိုးထောငျဖို့ ပိုပွီးခကျခဲပါတယျ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ Single mother အဖွဈနဲ့ ကလေးတှကေို ပွုစုပြိုးထောငျဖို့ဆုံးဖွတျတာဟာ လေးစားခြီးကြူးဖှယျရာပါ။
Single mother တှဟော ….
Single mother တဈယောကျဖွဈလာတဲ့အခါ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ ထငျမွငျခကျြတှနေဲ့ ဝဖေနျမှုအမြိုးမြိုးကို ရငျဆိုငျရပါတယျ။ သားသမီးအတှကျ တဈယောကျတညျးမားမားမတျမတျရပျတညျနတေဲ့ Single mother တှကေို ပတျဝနျးကငျြက ဖေးမမယျ့သူထကျ ထိုးခမြယျ့သူ၊ ဝဖေနျတဲ့သူ၊ ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတှကေ ပိုမြားပါတယျ။ အပွငျပနျးမှာ သနားသလို၊ ကိုယျခငျြးစာသလိုလုပျတတျပမေယျ့ နောကျကှယျမှာတော့ ကဲ့ရဲ့နတောတှကေို ရငျဆိုငျရပါတယျ။
Single mother ဘဝကိုရောကျသှားပွီဆိုတာနဲ့ သခြောပေါကျကွုံရတာကတော့ ငှကွေေးအခကျအခဲပဲဖွဈပါတယျ။ မိသားစုရပျတညျဖို့ ကိုယျတတျနိုငျသလောကျငှကေိုကွိုးစားရှာရငျးက ကလေးကိုပွုစုပြိုးထောငျရတာဟာ ဘယျလောကျပငျပနျးတယျဆိုတာ ကိုယျတိုငျကွုံဖူးမှ နားလညျနိုငျတာမြိုးပါ။
ကိုယျကပငျပနျးလှနျးလို့ နားလိုကျခငျြပမေယျ့ ကိုယျနားလိုကျရငျ မိသားစုရဲ့စားဝတျနရေေး၊ ကလေးအတှကျလိုအပျခကျြတှဖွေညျ့ဆညျးဖို့ ခကျခဲကပျြတညျးသှားမှာမို့ ပငျပနျးပမေယျ့ နားလို့မရတဲ့အခါမြိုးတှလေညျး ရှိတယျ။
အခကျအခဲအမြိုးမြိုးကွောငျ့ စိတျဓာတျကခြငျြပမေယျ့ ကလြို့မရဘူး
ငှကွေေးအခကျအခဲတှေ၊ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ဝဖေနျတဲ့စကားတှနေဲ့ အမြိုးမြိုးသောအခကျအခဲတှကွေောငျ့ စိတျဓာတျကခြငျြပမေယျ့လညျး ကိုယျ့ကလေးတှအေတှကျ ကိုယျကမားမားမတျမတျရပျတညျဖို့လိုအပျတယျ။ ကိုယျပွိုလဲသှားရငျ ကိုယျ့နောကျကမိသားစုလညျး ပွိုလဲသှားလိမျ့မယျ။ ဒါကို ကောငျးကောငျးနားလညျရပွီး Single mother မို့ စိတျဓာတျကခြငျြပမေယျ့လညျး ကလြို့မရဘူး။ မိသားစုအတှကျ အားတငျးထားရတယျ။
ငှရှောရလို့၊ အခကျအခဲတှကေို ဖွရှေငျးရလို့ဆိုပွီး စိတျလှတျလကျလှတျနလေို့မရပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုစောငျ့ကွညျ့ပွီး အတုခိုးမယျ့ ကလေးတှရှေိနတောကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုအမွဲတမျး သတိနဲ့နရေတယျ။ ကလေးတှအေတုယူမှားမယျ့လုပျရပျတှေ၊ အပွုအမူတှေ မလုပျမိအောငျ ဆငျခွငျရတယျ။ ကလေးတှအေတှကျ စံပွဖွဈအောငျ နရေတယျ။
ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ Single mother တဈယောကျဖွဈလာပွီဆိုတာနဲ့ ဘာတှပေဲကွုံကွုံ၊ အခကျအခဲတှဘေယျလောကျရှိရှိ ပွိုလဲသှားလို့မရပါဘူး။ ကိုယျ့ကလေးတှအေတှကျ ကိုယျကလှဲရငျအားကိုးစရာ၊ မှီခိုစရာမရှိတာမို့ ကိုယျကအမွဲတမျး ကွံ့ကွံ့ခိုငျခိုငျရပျတညျရတယျ၊ ဘာတှပေဲဖွဈဖွဈ အားတငျးထားရပါတယျ။
ကလေးတစ်ယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရတာဟာ အတော်လေးမလွယ်တဲ့အလုပ်ပါ။ ပင်ပန်းလွန်းလို့၊ မလုပ်ချင်တော့လို့ဆိုပြီး ရပ်ပစ်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မမွေးခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုကတည်းက အရိပ်တကြည့်ကြည့်ဂရုစိုက်ရတာ မွေးပြီးတဲ့အချိန်၊ လမ်းစလျှောက်တဲ့အချိန်၊ ပညာသင်တဲ့အချိန်ကနေ အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ထိ တောက်လျှောက်ပါပဲ။ မိစုံဖစုံရှိတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် အခက်အခဲတွေအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ မိဘတွေမစုံလင်တဲ့မိသားစုတွေ၊ Single mother တွေဆိုရင် ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ Single mother အဖြစ်နဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာ လေးစားချီးကျူးဖွယ်ရာပါ။
Single mother တွေဟာ ….
Single mother တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ ဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ သားသမီးအတွက် တစ်ယောက်တည်းမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေတဲ့ Single mother တွေကို ပတ်ဝန်းကျင်က ဖေးမမယ့်သူထက် ထိုးချမယ့်သူ၊ ဝေဖန်တဲ့သူ၊ ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေက ပိုများပါတယ်။ အပြင်ပန်းမှာ သနားသလို၊ ကိုယ်ချင်းစာသလိုလုပ်တတ်ပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာတော့ ကဲ့ရဲ့နေတာတွေကို ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။
Single mother ဘဝကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ သေချာပေါက်ကြုံရတာကတော့ ငွေကြေးအခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုရပ်တည်ဖို့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ငွေကိုကြိုးစားရှာရင်းက ကလေးကိုပြုစုပျိုးထောင်ရတာဟာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးမှ နားလည်နိုင်တာမျိုးပါ။
ကိုယ်ကပင်ပန်းလွန်းလို့ နားလိုက်ချင်ပေမယ့် ကိုယ်နားလိုက်ရင် မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ ကလေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ ခက်ခဲကျပ်တည်းသွားမှာမို့ ပင်ပန်းပေမယ့် နားလို့မရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။
အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျချင်ပေမယ့် ကျလို့မရဘူး
ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဝေဖန်တဲ့စကားတွေနဲ့ အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျချင်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကလေးတွေအတွက် ကိုယ်ကမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ကိုယ်ပြိုလဲသွားရင် ကိုယ့်နောက်ကမိသားစုလည်း ပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကို ကောင်းကောင်းနားလည်ရပြီး Single mother မို့ စိတ်ဓာတ်ကျချင်ပေမယ့်လည်း ကျလို့မရဘူး။ မိသားစုအတွက် အားတင်းထားရတယ်။
ငွေရှာရလို့၊ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းရလို့ဆိုပြီး စိတ်လွတ်လက်လွတ်နေလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီး အတုခိုးမယ့် ကလေးတွေရှိနေတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်း သတိနဲ့နေရတယ်။ ကလေးတွေအတုယူမှားမယ့်လုပ်ရပ်တွေ၊ အပြုအမူတွေ မလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်ရတယ်။ ကလေးတွေအတွက် စံပြဖြစ်အောင် နေရတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် Single mother တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ဘာတွေပဲကြုံကြုံ၊ အခက်အခဲတွေဘယ်လောက်ရှိရှိ ပြိုလဲသွားလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ကလေးတွေအတွက် ကိုယ်ကလွဲရင်အားကိုးစရာ၊ မှီခိုစရာမရှိတာမို့ ကိုယ်ကအမြဲတမ်း ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရပ်တည်ရတယ်၊ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အားတင်းထားရပါတယ်။
Categories General Knowledge, Tameelay Knowledge Tags 09, pp Post navigation
(၉-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခွငျး